अघोरी | Tsem Rinpoche
Dec 17, 2017 | Views: 280
अघोरी साधुले मानव खप्परबाट पानी पिउँदै
म धेरै चाखलाग्दो कुरा लिएर आएको छु। समयको सुरुवातदेखि नै ईश्वरको खोजी वा पवित्र स्वर्गसँग आबद्ध हुन धेरै तरिकाहरू अपनाइँदै आइएको छ। प्रवृतिसँगै उपासना गर्ने तरिका पनि परिवर्तन हुँदै गयो। हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्नेहरू विश्वभर १.२ अरबभन्दा बढी छन् र यो ५००० वर्षभन्दा बढीदेखि निरन्तर अभ्यास गरिदैँ आएको छ। हिन्दु धर्ममा धेरै सम्प्रदाय र उप-सम्प्रदायहरू छन्। भारत र संसारभरिमा हिन्दु धर्मलाई मुख्य धारको रूपमा स्वीकार गरिन्छ र यो गहन मार्ग हो।
अघोरी साधुले हाडका गहनाहरू लगाएर, मानव खप्पर र लाश जलाइएको खरानी मुख र शरीरमा घसेर हिँड्दै। हिन्दु धर्मको यो प्रथामा यी कुराहरू आवश्यक हुन्छन्।
हामी यो सही र गलत छ भनेर आँक्न सक्दैनौँ। हामी अरूको आस्था वा ईश्वरलाई ग्रहण गर्ने पद्धतिको निन्दा गर्न सक्दैनौँ । सबैसँग आराधना गर्ने वा नगर्ने आफ्नै अधिकार हुन्छ । कसैले पनि अरूको धर्म आफ्नो लागि जति नै फरक, अनौठो वा अपरचित भएपनि आलोचना गर्नु हुँदैन। त्यसेले हामीले अरूको धर्मलाई आलोचना वा उनीहरूको उपासना गर्ने अधिकारलाई निषेध गर्न सक्दैनौँ। विषेशगरी कुनै पनि धर्मका धार्मिक अगुवाहरूले कहिले पनि अरूको धर्मलाई आलोचना, हतोत्साहित वा तल देखाउनुहुन्न। हामीलाई विश्व शान्ति र मेल चाहिएको छ। धर्म शान्तिको वा विनाशको कारक बन्न सक्दछ जुन यो शक्ति कसले बहन गर्छ भन्नेमा भर पर्दछ।
दोर्जे शुग्देनका अनुयायीहरू पशु बलिदान गर्दैनन्, मान्छेको लास खाँदैनन्, संस्कारका रूपमा नशा सेवन गर्दैनन्, सार्वजनिक स्थलमा नाङ्गिदैनन्, मसानमा बसेर ध्यान गर्दैनन्, पशुको मलमूत्र खाँदैनन्। उनीहरू कुहिंदै गरेको खाना खाँदैनन्, मानव बलि शक्तिलाई(काली, स्त्रीरूपी ईश्वरीय शक्ति) चढाउँदैनन्, मुर्दाको खरानी शरीरमा घस्दैनन्। म यी प्रथाहरूलाई सही वा गलत भन्दिनँ। मैले यति मात्र भन्न खोजेको हो कि दोर्जे शुग्देनका अनुयायीहरू यस्ता खाले धर्म विधि वा दूरूस्तै खाले विधिमा आबद्ध हुँदैनन्। धेरै ठाउँहरू, भारतीय धार्मिक संस्कृतिको बारेमा अनभिज्ञ छन् यस्ता अभ्यासहरू शायद उनीहरूलाई बुझ्न धेरै गाह्रो छ कि? दोर्जे शुग्देनका अनुयायीहरूलाई दयाको विकास, शाकाहारी खाना खाने(सम्भव भए), लामरीम वा बुद्धिको रूपान्तरणको शिक्षा, असल मान्छे हुने, दान गर्ने, तीन रत्नको शरण लिने, गुरू भक्ति, धर्मको अध्ययन र पालना गर्ने र भगवान् बुद्धको ज्ञानोदय प्राप्त गरी समस्त जगतको भलो गर्ने शिक्षा दिइन्छ। त्यहि पनि तिब्बती अगुवाहरूले उनीहरूलाई भारतमा रहेको तिब्बती समुदायमा धार्मिक स्वतन्त्रता दिएका छैनन्।
शक्ति या ईश्वरको स्त्री स्वरूप।
भारतीय लोकतान्त्रिक सरकारले सबै धर्महरूको रक्षा गर्दछ तर यसभित्र तिब्बती नेतृत्वले धार्मिक मतभेदहरू सृजना गर्दै भेदभाव, हिंसा, घृणा र दोर्जे शुग्देनका अनुयायीहरूको विरूद्धमा पूर्वाग्रहको स्थिति उत्पन्न गराएकोछ। उनीहरूले दोर्जे शुग्देनलाई राक्षस र उहाँको अभ्यासकर्ताहरूलाई शैतानको अनुयायीहरू भनेर बोलाउँछन्। किन दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई चाहीँ रोक लगाइएको छ जुन अघोरीहरूको ईश्वरीय विश्वासभन्दा नम्र छ? धेरै संस्कृतिहरूले शक्ति वा शिवलाई अझ पर डरलाग्दोरूपमा हेर्छन्। यदि भारतले अघोरीलाई अनुमति दिन्छ भने किन शुग्देनको विश्वासीलाई दिँदैन? तर यहाँ समाधानको बाटो छ। भारतले तिब्बतीहरूलाई भारतभित्रै केही स्वतन्त्रता दिएको छ जुन तिब्बती अगुवाहरूले राजनीतिक कारणको लागि यो स्वतन्त्रतालाई दोर्जे शुग्देनका उपसनामाथि निषेध लगाउन प्रयोग गरिरहेका छन्। यदि तिब्बतीहरूले हिन्दु धर्मको अघोरी शास्त्रको अभ्यास गर्न थाले भने, कसरी तिब्बती नेतृत्वले यसलाई स्वीकार्ने छन्? के शिव वा शक्ति जसले रगत र मान्छेको मासु खान्छ यसलाई बुद्ध मान्न सकिन्छ? शिव वा शक्ति बुद्ध होइनन् भने के उनीहरूको अभ्यासमा रोक लगाइन्थ्यो? किन वा किन लगाइँदैनथ्यो? तिब्बती नेतृत्वले दोर्जे शुग्देनलाई बुद्धको रूपमा मान्दैनन् र निषेध लगाउन जरूरी ठान्छन्। यदि शिव, शक्तिलाई निषेध गरिन्छ भने के त्यो धार्मिक स्वतन्त्रताको आधारमा वा आफ्नो मान्छेहरुलाई भयानक राक्षसबाट रक्षा गर्नको लागि हो? यो कुन हो? के तपाईंहरू मान्छेको धर्ममा हस्तक्षेप र निषेध गर्नुहुन्छ कि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ? तपाईं धार्मिक स्वतन्त्रता दिएर पुन: फेरि सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई निरूत्साहित गर्न पाउनुहन्न। शिव वा शक्तिको मामिलामा धार्मिक स्वतन्त्रता वा आफ्नो मान्छेहरूलाई गैर बुद्धबाट संरक्षण गर्नुहुन्छ? अघोरी शास्त्रको अभ्यास जुन स्वीकारीयको छ(जुन यो हुनुपर्छ), शुग्देनको अभ्यासको लागि आवश्यकता झन् स्वीकार्न सजिलो र जनसाधारणमाझ अनुकुल रहेको छ र यसमा अत्याधिक देखिने त्यस्तो केही छैन। त्यसैले फेरि पनि, किन अघोरी स्वीकार्य छन् तर दोर्जे शुग्देनको अभ्यास स्वीकार्य छैन? यदि तिब्बती नेतृत्वले अघोरी वा अरू कुनै पनि हिन्दु धर्महरूको बारेमा टिप्पणी गर्ने हिम्मत गरे भने उनीहरूले अधिक विरोध खेप्नुपर्ने छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। किनभने उनीहरूले यो तथ्य लुकाउन भरसक कोशिस गर्छन्। कुनै पनि वास्तिवक लोकतन्त्र र उनका नेताहरूले धर्मको बारेमा कहिले पनि आलोचना गर्दैनन् चाहे त्यो साँच्चिकैको शैतान मान्नेहरू नै किन नहुन् । म कुनै पनि उपासनाको पक्षमा छैन, केवल एक बयान गरिरहेको छु कि धार्मिक पुजालाई जुनसुकै रूपमा पनि अनुमति दिनुपर्छ र कुनै पनि सरकार वा नेताले यो कुरामा प्रतिबन्ध, आलोचना वा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
अघोरी संस्कृत शब्द “अघोर” बाट आएको हो, जसको अर्थ अन्धकारको अनुपस्थिति हो। अघोरले चेतनाको प्राकृतिक अवस्थालाई बुझाउँछ जहाँ मस्तिष्क डर र पश्चातापबाट मुक्त हुन्छ। यो अहंकार र त्रासभन्दा माथि उठेको अवस्था हो। यदि कोही त्रासमुक्त हुन्छ भने उसले भेदभाव र हानि पुर्‍याउँदैन। हिन्दु धर्मको अघोरी शास्त्र यी सबै अभ्यासहरूमा संलग्न हुन्छ जुन विश्वको छुट्टा-छुट्टै भू-भागहरूमा रहेकाहरूलाई ग्रहण गर्न गाह्रो पर्न सक्छ। तर मैले भने जस्तै ईश्वरीय प्राप्तिको लागि एउटै मात्र मार्ग छैन तर धेरै बाटाहरू छन् र हामीले यी सबै मार्गको आदर गर्नुपर्छ। यो प्रथा निरन्तररूपमा भारतमा संरक्षित हुँदै आएको छ र कसैले पनि उनीहरूलाई निन्दात्मक नामले बोलाउँदैनन्, बेवस्ता गदैनन् वा उनीहरूको अभ्यास र भगवान् प्राप्तिको तरिकालाई अश्लिल छ भनेर भन्दैनन्।
अघेरी प्रथा र *साधुका बारेमा केही आधरभूत जानकारी:
उनीहरू ईश्वरका अनुयायीहरू हुन्। उनीहरू ईश्वरमा विश्वास गर्छन्। उनीहरू भगवानलाई शिवको नामले मान्दछन् जो चाहीँ ५ औँ शताब्दीको सुरुवातदेखि चलिआएको छ। उनीहरूले स्त्रीरूपी भगवान् शक्ति, कालीलाई पनि पुज्छन्।
उनीहरू साधुकोरूपमा नियुक्ति भएपछि परिवारबाट विच्छेद हुनुपर्छ र कहिले पनि आफू जन्मेको ठाउँमा फर्किनु हुँदैन। उनीहरू परिवार र जिम्मेवारीहरू आध्यात्मिक ज्योतिका लागि बाधा हुन् भन्ने सोच्दछन्।
हिन्दुहरूले मृत शरीरलाई आर्यघाटमा लगेर जलाउँछन्। अघोरी साधुहरू सुख र आरामबाट मुक्त हुन जीवनभर केबल आर्यघाटमा नै बसोबास गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनीहरूले पशुबध गर्छन् र पशुबली आफ्नो स्त्रीरूपी देवी कालीलाई चढाउँछन्। विगतका दिनहरूमा उनीहरूले पशुबलि सँगै मानवबलि पनि दिन्थे। आजका दिनहरूमा यो पशुबलिमा मात्र सीमित भएको छ।
साधुपन प्रारम्भ गर्नको लागि, गुरू ग्रहण गर्नु पर्दछ र गुरूको सबै निर्देशनहरूलाई ठिकसँग पछ्याउनुपर्ने हुन्छ। मानव खप्पर (कपाला) खोजेर त्यसलाई खाना खाने भाँडाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यानको समयमा अनिवार्यरूपमा लाश जलाइएको खरानी शरीरमा घस्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको धार्मिक अनुष्ठान अनुसार मृत शरीरको सडेको मासु खानुपर्ने र लाशमाथि बसेर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नु भनेको डर र माया मोह, स्वाद, स्पर्श, हेराई, गन्धबाट मुक्त भएर, ईश्वर प्राप्तिको लागि गरिने प्रतीकको रूपमा लिइन्छ।
उनीहरू समाज, खाना, परिवारको मतलब नगरी स्वतन्त्ररूपमा हिँड्छन् र रातको समयमा जहाँ मसानघाट भेटिन्छ त्यहिँ सुत्छन्। उनीहरूको सुत्ने स्थान वा आराम गर्ने ठाउँ त्यही हुनुपर्छ जहाँ लास जलाइन्छ। उनीहरूले खाना र पानी मानव खप्पर वा कपालामै राखेर खानुपर्छ।
उनीहरूले भाङ्ग, धतुरो र मदिरा सेवन गर्छन् जसले उनीहरूलाई अरू हिन्दु धर्मावलम्बीभन्दा फरक देखाउँछ। मत्तपनलाई आत्मसात गर्नु भनेको सांसारिक भोगाइबाट टाढा रहने अर्कौ उपाय हो।
यी कुराहरू हिन्दु धर्मलाई आलम्वन गर्ने अघोरीका केही आधारभूत बहालीहरू, नियमहरू र विश्वासहरू हुन्। म विश्वस्त छु कि यस विश्वासमा अझ धेरै गहिराही, अर्थ र प्रतीकहरू छन् जुन यदि तपाईंहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने अनलाइन खोज्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि धर्म वा विश्वास वा आध्यात्मिक मार्गको बाहिरी अभ्यासहरू, प्रतीकहरू जुन हाम्रो भन्दा धेरै भिन्न छन् त्यसलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भारत हजारौं वर्षदेखि धेरै धर्महरू भएको महान् र प्राचीन राष्ट्र हो। हामीले आफ्नो संस्कृतिबाट सिकेका कुराहरूलाई मध्य नजरमा राख्दै उनीहरूको ईश्वरीय प्राप्तिको तरिकालाई तुलना गर्न मिल्दैन। सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा अत्याधिक फरक हुन्। कुनै पनि संस्कृति अर्को भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। संस्कृति चाहे लौकिक वा आध्यात्मिक होस् अद्वितीय हुन्छ र त्यो कुरा हामीहरूले उनीहरूकै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ न कि हाम्रो दृष्टिकोणबाट। सामाजिक मूल्य मान्यता, ग्रहण र धर्मले विशेष क्षेत्रका मानिसहरूको विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अन्तिममा, कसले यो मार्ग सही वा गलत हो भन्न सक्छ र? तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, सबै अगुवाहरू लौकिक वा आध्यात्मिक, दुवैले सधैँको लागि धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र कहिले पनि धर्मको आधारमा विभाजन सृजना गर्नु हुँदैन। यो परिवार, छिमेक, समाज, शहर, प्रान्त, प्रदेश, देशहरू र विश्वमै शान्ति ल्याउनको लागि अत्यावश्यक छ। हामीले धर्मलाई यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि जसले पारस्परिक आदर र सुमधुर सम्बन्ध सृजना गर्छ।
शक्ति ईश्वरकी महिला रूप हुन् र उनले रगत माग्छिन्। ईश्वरको लैङ्गिक स्वरूप हुँदैन। हामी ईश्वरलाई लैङ्गिक स्वरूप दिन्छौँ। त्यसैले ईश्वरलाई महिला वा पुरूष, दयालु वा क्रुर, भयानक वा कोमल रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। ईश्वरको रेखा र सीमा हुँदैन।
अघोरी साधुद्वरा अनुष्ठानको समयमा मसानमा शक्ति आमन्त्रित गर्दै।
अघोरीले आफ्नो अभ्यास, भक्ति र पुजालाई शिवको रूपमा चिनिने भगवानप्रति समर्पित गर्छन्। शिव विश्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति हुन्। त्यसैले उनीहरू भगवान् वा शिव सर्वव्यापी छन् भन्ने विश्वास राख्दछन्। उनीहरूको उद्देश्य भनेको भगवान् शिवसँग जोडिएर प्रबुद्ध हुनु हो। उनीहरूले यस्तै आराधना स्त्रीरूपी भगवान् शक्तिसँग पनि गर्छन्।
म कसैलाई पनि विशेषगरी हिन्दु धर्मावलम्वीहरूलाई चोट नपुर्‍याई यो पोस्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यदि यहाँ केही गल्तीहरू भए म मेरा हिन्दु दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू समक्ष क्षमायाचना गर्दछु। हिन्दु धर्मका प्रक्रिया, विस्तृत संस्कार र पुजा विधि र गहन विश्वासलाई मैले न त पूर्ण रूपमा बुझेको छु न त बुझ्न नै सक्छु। म अर्को संस्कृतिको भएको हुनाले यो कुरामा अनभिज्ञ अवलोकनकर्ता मात्र हुँ, त्यसैले म यस हिन्दु धर्मको अघोरी प्रथाको बाहिरी अशं मात्र बाँड्न सक्छु। म हिन्दु धर्मको हरेक पक्ष, गुरूहरू र अनुयायीहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्छु।
दोर्जे शुग्देनको बारे थप जानकारीको लागि: https://www.tsemrinpoche.com/l/np/
Tags: Buddhism, current affairs, dorje shugden, nepali, religion
« ईश्वरलाई पुकार्दा
दोर्जे शुग्देनका उदाहरणीय कथाहरु र सजीव उपन्यास »
12 Responses to अघोरी
Joy Kam on Dec 10, 2018 at 6:50 am
Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 8:06 am
Pastor Adeline Woon on Sep 21, 2018 at 1:16 pm
Valentina Suhendra on Aug 7, 2018 at 8:40 pm
Made in Japan on Jul 31, 2018 at 5:14 am
Joy Kam on Jul 22, 2018 at 7:27 pm